आज मिति २०७६, असाेज २१ गते मंगलबार, राशिअनुसार आजको आफ्नो भाग्य हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Nepali news portal
२१ आश्विन २०७६, मंगलवार ०६:०० October 8, 2019 काठमाडौं डेष्क
वि.सं. २०७६ असोज २१। मंगलबार। इ.स. २०१९ अक्टोबर ८। ने.सं. ११३९ कौलाथ्व। आश्विन शुक्लपक्ष। दशमी, १६:१९ उप्रान्त एकादशी।
मेष – चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा चिताएको काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। श्रम गरीकन चिताएको मूल्य प्राप्त नहुन सक्छ। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने परिस्थितिले पनि अप्ठ्यारो मोडमा पुर्याउन सक्छ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, फाइदाका लागि गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। (नेपाली पात्रो)
विभिन्न अवसर देखिए पनि आलस्य गर्दा पछि परिएला। योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन विलम्ब हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको विषयमा सोचेको परिणाम प्राप्त नहुन सक्छ। गुरुजनको सहयोगले रोकिएको काम बन्न सक्छ। धेरै समय दिन नसकिए पनि पढाइलेखाइमा केही उपलब्धि हासिल हुनेछ। मेहनत गर्दा फाइदा उठाउन सकिनेछ, गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। (नेपाली पात्रो)
बेसुरमा वचन दिनाले दुःख पाइनेछ। साथीभाइले साथ नदिन सक्छन्। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। पशु र कृषिबाट सोचेको लाभ नउठ्न सक्छ। काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ। आफन्त र परिवारजनको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ। (नेपाली पात्रो)
फाइदाका पछि लाग्दा छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ। काममा लगानी बढाउनुपर्ला। खर्च लागे पनि लामो यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। घरखर्चको मात्रा बढ्नेछ। समयमा होस नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नुपर्ला। बनिसकेको काम बिग्रने हुँदा होसियारीसाथ काम लिनुपर्ने समय छ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। (नेपाली पात्रो)
समयमा काम पूरा नहुनाले अवसर गुम्न सक्छ। आशा देखाउनेहरूबाटै धोका पाइने सम्भावना छ। सोखले फजुल खर्च बढाउन सक्छ। तापनि, सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। चल-अचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। (नेपाली पात्रो)
२५ लाखले छोडे राजधानी